Tsiroanomandidy Zaza vao teraka, nipotsaka ny masony
Zaza menavava iray vao teraka tamin’ny alahady teo no nipotsaka toy ny hivoaka ny masony sady menamenabe raha vao latsaka tamin’ny tany izy.
Tany amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy, Faritra Bongolava no nitrangany. Fantatra tamin’ny fampitam-baovao azo fa zanak’olona sahirana ity tsy manan-tsiny ity, zanaka fahatelo. Raha araka ny fanazavan’ny mpampiasa ny renin’io zaza io izay miantoka azy hatreto dia feno zavatra miraikidraikitra toy ny angadrano ihany koa ny vatan’ity zaza ity. Minono tsara anefa izy saingy kely dia kely ny lanjany raha oharina amin’ny lanjan’ny zaza vao teraka ara-dalana. Nanolo-kevitra azy ireo ny amin’ny handidiana ny mason’ity zazakely ity ilay mpitsabo ao amin’ny hôpitalim-panjakana iray mandray an-tanana azy ireo ao Tsiroanomandidy ao. Raha araka ny fanazavany mantsy dia takona ao ambanin’io zavatra menamena manarona azy io ny mason’ilay zaza. Manao antso avo ho an’ny malala-tanana rehetra izy ireo. Ny laharam-pinday 0349535996 no hahafahana mifandray aminy mivantana.